Soo-saarka Beeraha Beeraha Soosaarayaasha & Shirkadaha - Warshadaha hurdada ee Shiinaha
i Hawo-maareyn Hawo-Bixiyeyaal (Daaweynta Xanuunka Hurdada ee Hurdada)
AST (Teknolojiyada isku-xirka Automatiga ah) Si otomaatig ah u raacso bukaanka neefsashada, si sax ah u go'aamiya waqtiga kiciyaha bukaanka iyo beddelaadda, oo waxaad siisaa isbarbardhiga u dhigma iyo cadaadiska saxda ah; tikniyoolajiyadda tooska ah ee dareenka adigoon gacantu dejin dareenka, yaree shaqada neefsashada bukaanka. Tikniyoolajiyadda tooska ah ee korantada Korantada algorithm cusub, si toos ah u hagaajiya cadaadiska, ogaanshaha oo ka jawaab celisa neefsashada kala duwan ...
BPAP A30 Auto-heerka hawada-aan hawo lahayn
Qalabka Mashiinka Hurdada ee Hurdada Hurdada Raaxada Wanaagsan Neefsasho wanaagsan, Hurdo Wanaagsan －Waxaa loo adeegsan karaa quudinta iyo bukaan jiifka ba'an ee xanuunka 'apnea syndrome syndrome'. EffectWaxay saameyn weyn ku daweynaysaa cuncunka, dawakhaad subax, hurdo daal iyo astaamo kale oo ay sababaan hurdo xumo. －BPAP A30 wuxuu bixiyaa barnaamijka daaweynta hurdada oo raaxo leh oo wax ku ool ah oo loogu talagalay quusinta iyo xannibaadda bukaannada xannuunka jiifka. Cadaadis sarreeya, Xoog badan oo cadaadiskiisu waa 4cmH2O-30cmH2O. Sepray BPAP A30 ayaa ku habboon ...
BPAP 30 Heer-barar hawo-qaadasho lahayn
Neefsasho wanaagsan, Hurdo wanaagsan －Isku dabaal-degida quudhsiga iyo bukaan-jiifka xanuun daran ee hurdo-la’aanta daran. EffectWaxay saameyn weyn ku daweynaysaa cuncunka, dawakhaad subax, hurdo daal iyo astaamo kale oo ay sababaan hurdo xumo. －BPAP 30 wuxuu bixiyaa barnaamijka daaweynta hurdada oo raaxo leh oo wax ku ool ah oo loogu talagalay quusinta iyo xannibaadda bukaannada xannuunka jiifka. BPAP 30 ayaa si wax ku ool ah u wanaajin kara calaamadaha soo socda: Neefsiga, Afka neefsashada, Insomnia, Neefsashada habeenkii oo kacsan, nasasho maalmeed, hoos u dhaca xusuusta ...
CPAP 25 Hawo-mareyn aan firfircoonayn
Neefsasho wanaagsan, Hurdo wanaagsan －Isku dabaal-degida quudhsiga iyo bukaan-jiifka xanuun daran ee hurdo-la’aanta daran. EffectWaxay saameyn weyn ku daweynaysaa cuncunka, dawakhaad subax, hurdo daal iyo astaamo kale oo ay sababaan hurdo xumo. －BPAP 30 wuxuu bixiyaa barnaamijka daaweynta hurdada oo raaxo leh oo wax ku ool ah oo loogu talagalay quusinta iyo xannibaadda bukaannada xannuunka jiifka. CPAP 25 waxay si wax ku ool ah u wanaajin kartaa calaamadaha soo socda: Neefsiga, Afka neefsashada, Nuuxsashada, hurdada oo habeenkii kacsan, nasasho maalmeedka, hoos u dhaca xusuusta ...
Qalabka hawada ee aan duuliyaha lahayn ee 'CPAP A25 Auto CPAP'